Itafile yolwimi lwesiRashiya? Injani imeko eRashiya? | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Uluhlu lweemeko zolwimi lwaseRussia? Yintoni ukufa eRashiya?
KwisiRashiya, ukutshintsha amagama ngamatyala ibizwa ngokuba yi-declension. Ityala lokufaNgaba uqinisekile ifom igama elinikiweyo. KwisiRashiya, kukho iimeko ezintandathu.
Ityala lokutyumba Isinye siyimo yokuqala yesibizo, isimelabizo, isimelabizo, ukubala okanye isenzi Ngezibizo kwimeko yokutyumba, sibuze imibuzo Ngubani? okanye yintoni: inkwenkwe, umthi Ityala elonyuliweyo lelomthetho, phantsi kwisivakalisi.
Unobuhle uphendula imibuzo Ngubani? okanye yintoniakukho nyana akukho mthi
Ityala lendalo uphendula imibuzo Ngubani? okanye yintoni Ndiza kunika inkwenkwe, ndiyinike umthi.
Ityala elenzekileyo uphendula imibuzo Ngubani? ** okanye ** yintoni? Ndibona inkwenkwe, umthi.
В icala leseli izibizo siza kubuza imibuzo Ngubani? okanye yintoni?ukuvuma inkwenkwe, umthi.
В ulungiso imibuzo evumelekileyo kwisibizo malunga nabani? okanye uthini ngayo? Ndicinga ngomfana, malunga nomthi.
Imeko yesiRashiya luhlobo lwegrama edibanisa izibizo ngamanye amagama kwisicatshulwa okanye isivakalisi. Ityala lixhomekeke ngokuthe ngqo kwisibizo esinqabileyo ukuya kwinqanaba elinye okanye kwelinye, ngelixa, njengommiselo, ukupheliswa kwala magama kutshintsha. Lilonke, kukho iimeko ezintandathu kulwimi lwaseRussia, ezizezi:
I-1) iphakanyisiwe (uphendula imibuzo: ngubani? Okanye ngantoni?)
I-2) genitive (iphendula imibuzo: ngubani? Okanye ngantoni?)
3) dative (uphendula imibuzo? Ngubani?
I-4) ukumangalela (uphendula imibuzo: ngubani? Okanye ngantoni?)
I-5) enegunya (uphendula imibuzo: ngubani? Okanye ngantoni?)
I-6) umandulelo (uphendula imibuzo: malunga nabani? Okanye malunga nantoni?)
Kwilwimi laseRussia, imeko yoluhlu lwegrama ngoncedo lwabo baveza unxibelelwano nesihloko esikhethwe sisibizo. Kulwimi lwesiRashiya lwale mihla kukho iimeko ezi-6. Nalu itheyibhile apho unokuthi uzibone zonke iimeko, kunye neziphelo zohlobo olwahlukileyo kwisinye kunye nakwesininzi.
Imeko luphawu lwegrama ebonakalisa ubizo kunye neziphawuli. Amagama anokutshintsha kwiimeko kwaye olu tshintsho lubizwa ngokuba yi-declension. Oko kukuthi, izibizo (kunye neziphawuli) ziyahanjiswa ngamatyala. Oku kuhlahlula kubo kuxhomekeke kwamanye amagama emi ecaleni kwegama elinikiweyo kwaye achonge imeko yawo.
Iyonke kwiimeko zaseRussia 6:
Nominal - Ngubani? -umhlobo, ibhegi
Inesiphiwo? -umhlobo, iingxowa
Umsebenzi: - Ngubani? -umhlobo, ibhegi
Ezichasene- ngubani? -umhlobo, ibhegi
Ngaba ubuyile - ng Ngubani? -umhlobo, ibhegi
Ukulungiselela phambili - malunga nabani na / malunga neNdebe yeHlabathi? -ngomhlobo, malunga nengxowa
Ilanga alikho nzima, ngaphandle kwalababuleweyo.
Ityala elenzeka eRashiya luphawu olwahlukileyo lwegrama apho luveza ubudlelwane besihloko. Ngokubanzi, kukho iimeko ezichazwe kwisiseko semibuzo ebuzwayo, nantsi ke itafile:
Nika ingqalelo kumagama ancedisayo ukunceda ekuchongeni imeko.
Itafile yamatyala aseRussia, evezwe ngezantsi, uya kuvumela ukufunda nokukhumbula isihloko esibaluleke ngolu hlobo ngesiRashiya.
Ityala libizwa ngokuba yimo yegama, xa igama litshintsha amatyala- lithe lathathelwa ingqalelo.
Kodwa ayizizo zonke iindawo zokuthetha ezinokuba namatyala kwaye zithambekele ngokwamatyala.
Umzekelo, sinokwala izibizo, izichazi, izimelabizo, kodwa singangqinelani izenzi ngakwimeko.
Zintandathu kuphela iimeko zaseRussia, imeko nganye inemibuzo yayo yezihloko ezenziwayo kunye nezingaphilanga, kwaye ineziphelo ezahlukeneyo zesinye kunye nobuninzi.
Itafile yamatyala aseRussia Ngemibuzo kunye nemizekelo engezantsi:
Imeko yimo yegama elisetyenziswe kulo isiRashiya. Kulwimi lwaseRussia kukho iimeko ezintandathu, kwaye nganye kuzo iphawulwa ngokwendlela yalo umbuzo uphendula kuyo. Nalu uluhlu lweemeko ezinesiphelo kunye noseto olusetyenzisiweyo -
Ityala lokufa sisiseko segrama, ibonisa indima yegama kunye nokudibanisa amagama kwizivakalisi. Ukutshintsha kwamatyala kukutsala igama.
Ukuze izivakalisi zinxibelelane ngokulandelelana kwaye izibizo ziqondakale ngokulula, iinombolo zeziphawuli mazithathe ifom efanelekileyo. Ukwenza oku, kuya kufuneka ukwazi ukuthelela ngokufanelekileyo, kwaye ngoku sicela uncedo kwiPhepha.
Ukuguqulwa kwamagama ngamatyala esiRashiya okanye, ngamanye amagama, i-declension lutshintsho kwindlela yegama. Oko kukuthi, igama elifanayo liza kuphendula imibuzo. Nantsi ividiyo eyonwabisayo yabantwana ukukhawuleza bakhumbule iimeko kwivesi.
Kwilwimi laseRussia kukho amagama anokutshintshwa, kwaye anokuguquguquki. Ke imeko yecandelo eliguquguqukayo lwegama. Ngoncedo lwetyala, sinokulungelelanisa isibizo kwelinye igama kwisivakalisi: kwintloko, kwinto ethile, njl njl.
Itotali yamatyala kulwimi lwethu i-6. Ukwenza kube lula ukukhumbula iimeko, jonga kwithebhulethi:
Imibuzo ye-21 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,359.